Xasan Sheekh Oo Dhaliilay Maamulka Farmaajo – Heemaal News Network
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku eedeeyay Madaxweynaha mudada xilheyntiisa ay dhamaatay ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi farmaajo in dallka uu geliyay xaalad hubanti la’aan ah oo mugdi gelin karta mustaqbalka dalka.
Qoraal uu Xasan Sheekh soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa waxaa uu ku sheegay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qaaday tallaabo mugdi gelin karta mustaqbalka dalka balse, Soomaaliya waxay leedahay shacab & haldoor ka samata bixin kara xaaladaha adag.
“ Waa xaqiiqo aan la jecleyn in madaxweynaha xilkiisu dhammaaday uu dalka geliyay xaalad hubanti la’aan ah oo mugdi gelin karta mustaqbalka dalka balse, Soomaaliya waxay leedahay shacab & haldoor ka samata bixin kara xaaladaha adag. Waxaan ku baaqayaa xasillooni & aragtiwadaagayuu yiri” Xasan Sheekh.
Warkan kasoo baxay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kama mid ah Midowga Musharixiinta ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli uu dhamaaday muddo xileedka Maaxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaana aan weli lagu heshiin arrimaha doorashooyinka.
Maraykanka Oo Luqad Adag Kulaha Hadlay Madaxda Soomaalida
Ganacsato ka Qayliyay Markab Xoolo Qaaday Oo Uu Sacuudigu Dib Ugu soo Celiyay Berbera.